तुलसीलाई जल चढाउँदा उच्चारण गर्नुहोस् यो मन्त्र, घरमा हुनेछ लक्ष्मीको कृपा ! | सुदुरपश्चिम खबर
तुलसीलाई जल चढाउँदा उच्चारण गर्नुहोस् यो मन्त्र, घरमा हुनेछ लक्ष्मीको कृपा !
घरमा कलह असान्ती भएमा भान्सा कोठाको नजिक राख्नाले कलह शान्त हुन्छ। घरमा झै झगडा समाप्त हुन्छ। श्रीमान श्रीमतीबीचको झगडा भएमा यसो गर्नाले राम्रो फाइदा गर्दछ। प्रेम बढ्न थाल्दछ। (gnewsnepal.com बाट सभार)
निषेधाज्ञाको समीक्षा गर्दै गृह, खुकुलो बनाउने मोडालिटीमा छलफल